Chinotevera chiitiko cheApple chinopemberera Zuva reVakadzi Vepasi rose | IPhone nhau
Vazhinji venyu pamwe hamuzvizive, asi Apple inoda kuti tifambise madhongi edu nemidziyo yavo. Hongu, maDevices akanaka kwazvo mukugadzirwa kwedu kwemazuva ese, kunakidzwa nemitambo inoshamisa yatinogona kuona muApp Store, kana kutomboona mafirimu kuburikidza neNetflix app, asi handizvo chete ... Uye kana iwe uri wevaya vane a Apple Watch, ziva kuti imwe yenzira idzo Apple yanga ichida kupa, mushure mekunyengedza kuvhura mhando dzemhando yepamusoro, ndeyayo cmitambo maitiro. Iwe unoziva, iyo yekuvhara mhete ...
Kuti uite izvi, Apple yakagadzira iyo ringi system yeAction app, chirongwa chatinogadzirisa patinotanga Apple Watch kekutanga (chinangwa chered ring chinogona kuchinjwa gare gare), uye kuti tinogona kuzadza maererano maitiro edu ezuva nezuva kana nemitambo yatinoita. Apple inoda kukukurudzira uye ndosaka nguva nenguva ichitangisa menduru nyowani dzatinogona kuwana mushure mekudzidzira. Iyo nyowani: menduru yakakosha yekurangarira Zuva reVakadzi reMarudzi, iyo nenzira inopembererwa munaKurume 8 ...
Isu hatisati taziva zvakawanda nezvekuti chiito chakakosha cheZuva reVakadzi reNyika Dzese chicha shanda sei, asi tinoziva izvozvo muUnited States kuwana iyi menduru nyowani yakakosha isu tinongofanirwa kupedzisa a kurovedza muviri kubva pakufamba, kumhanya, kana kudzidziswa newiricheya kwe1 maira, hatigone kuve nyore.
Mumazuva anotevera iwe uchagashira ruzivo runodzidzisa nezve chiito chakakosha paZuva reVakadzi, kunyanya nezvekuti ungawana sei izvi yakakosha menduru. Iwe unoziva, ngatifambei mbongoro yenyu uye titore iyo chaiyo bheji yekupemberera Zuva reVakadzi reMarudzi, mamiriro ekunze akanaka saka hatisisina chikonzero, handiti?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Chinotevera chiitiko cheApple chinopemberera Zuva reVakadzi Venyika
Iyi ndiyo pfungwa yakanakisa kusvika nhasi yeIOS 13 yePadad